Caalamka, 27 May 2018
Axad 27 May 2018
Afghanistan: Qarax Dilay ugu Yaraan 8
Afhayeen u hadlay dowladda Afghnsatan ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay degmada Nad Ali ee gobolka Helmand aroornimadi hore ee Axada maanta ah.
Ghaza: Labo ku Dhintay Duqeynta Israel
Ugu yaraan 118 ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa waxa dilay ciidanka Israel tan iyo markii bishii March ay biloowdeen banaanbaxyo ay xadka Israel iyo Ghaza ka sameeyeen kumanaan reer Falastiin ah.
Qarax ka dhacay maqaayad ku taalla Canada
Afghanistan: Taliban oo dagaal ku dishay askar badan
Tobaneeyo ka tirsan ciidamada ammaanka Afghanistan ayaa lagu dilay dagaal maalmo socday oo ay dagaalyahanada Taliban kula galeen gobolka Ghazni ee bariga dalkaas.
Dalkii saddexaad oo safaarad ka furtay Qudus
Dalka Paraguay ayaa maanta safaarad ka furtay magaalada Qudus, wuxuuna noqday dalkii saddexaad ee qaada tallaabadan siyaasadeed ee xasaasiga ah.
Mahmoud Abbas oo isbital la dhigay
Madaxweynaha Falastiin, Mahmoud Abbas ayaa axaddii la dhigay isbital ku yaalla Daanta Galbeed, sida ay sheegeen dhaqaatiirta iyo saraakiisha Falastiiniyiinta, kuwaas oo sidoo kale warar is khilaafsan ka sheegay xaaladdiisa.
DRC: Cudurka Ebola oo Dad Hor leh Dilay
Wasaaradda Caafimaadka Congo ayaa sheegtay in hal qof oo cusubi uu maanta u geeriyooday xanuunka Ebola, kaas oo tirada guud ee dadka u dhintay cudurkaasi, oo ku faafay gobolka Equateur ee galbeedka dalkaasi, ka dhigeysa 26 ruux.
Doorasho ka Socota Venezuela
Mucaaradka ayaa qaaddacay doorashadan iyagoo u arka mid madaxweynaha hadda Nicolas Maduro oo kali-talisnimo ay ku eedeynayaan uu isku caleemo saarayo.
Daacish oo laga Daad-gureynayo Agagaarka Dimishiq
Hay'ad la socota arrimaha dalka Syria oo fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in la daadgureeyey dagaalyahaniintii kooxda Daacish iyo qoysaskoodii, ka dib markii dagaalka lagaga adkaaday, iyaga oo la geeyey dhul lama degaanka ah ku yaala bariga caasimadda dalka Suuriya.
Zeid Ra'ad "Dadka Gaza waxay ku jiraan xabsi"
Madaxa xuquuqda aadanaha QM ayaa ku eedeeyey Israel inay dadka Falastiiniyiinta duudsiisay xuquuqdooda aadanaha.